John Deere အတွက်အင်ဂျင်အဆို့ရှင်
Mercedes Benz အတွက်အင်ဂျင်အဆို့ရှင်
Engine Valve Ringing ရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲ။
အဆို့ရှင်ဆူညံသံကဘာလဲ? မော်တော်ယာဉ်စတင်သောအခါအင်ဂျင်သည်စည်းချက်သံကို“ ကလစ်” လုပ်သည့်သတ္တုခေါက်သံနှင့်ဆင်တူသည်။ အင်ဂျင်၏အမြန်နှုန်းတိုးလာသည်နှင့်အမျှစည်းချက်မြန်သည်။ ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်အင်ဂျင်သည်ထိုကဲ့သို့သောဆူညံသံမျိုးကိုကြာမြင့်စွာမထားနိုင်ပါ။ အများစုမှာ ...
Variable Valve Timing System ၏အားသာချက်များကားအဘယ်နည်း။
အင်ဂျင်ပေါ်ပေါက်လာချိန် မှစ၍ လူတို့သည်သူ့အားတိုးတက်မှုများပြုလုပ်ရန်မရပ်တန့်ကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောမှသေးငယ်သောနေရာများသို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းအမျိုးမျိုးရှိသောအင်ဂျင်အသစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ မော်တော်ယာဉ်များတိုးလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောစွမ်းအင်အကျပ်အတည်းကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲမဟုတ်သောသဘာ ၀ ဓာတ်ငွေ့သည်တဖြည်းဖြည်းဟောင်းနေ
မော်တော်ဆိုင်ကယ်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာစီးနင်းလာသောအခါအကြောင်းအရင်းကိုရှာရန်အင်ဂျင်အဆို့ရှင်ရှင်းလင်းမှုသည်အလွန်ကြီးလွန်းသည် (သို့) သေးငယ်လွန်းသည်။ အချက်အလက်များအများအပြားနှင့်သင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်လိုအပ်သည်၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဆန်းစစ်ရန်။ အင်ဂျင် La တွင်အဆို့ရှင်ရှင်းလင်းမှုညံ့ဖျင်းခြင်း
Car Engine Valve ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ။
မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများအင်ဂျင်အဆို့ရှင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်သည်ကြမ်းတမ်းခက်ထန်သည်၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်သည်။ အဆို့ရှင်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်သည် ၈၀၀ reach အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ ချောဆီအရည်ကြည်စက်၏အဆုံး၌အဆို့ရှင်အလုပ်နှင့်အဖွင့်အပိတ်များမကြာခဏပြုလုပ်သောအခါ၊ အဆို့ရှင်အစိတ်အပိုင်းများကိုအလွန် eas ဖြစ်ကြောင်း ...
မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာစီးနင်းလိုက်ပါကယေဘုယျအားဖြင့်အင်ဂျင်တွင်အဆို့ရှင်ရှင်းလင်းမှုများလွန်းသည်၊ သေးငယ်လွန်းသည်၊ ကြီးမားလွန်းသည်၊ သေးလွန်းသည်၊ ကြီးလွန်းသည်သို့မဟုတ်သေးငယ်သည်။ အဆို့ရှင်များနှင့် ပတ်သတ်၍ သိသောလူအများစုသည်ဤပြwhatနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အရာနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုမသိရှိနိုင်ပါ။
Wuji နိုင်ငံ၊ Shijiazhuang မြို့၊ Hebei ပြည်နယ်၊ တရုတ်
ဇန်နဝါရီ -28-2021 Engine Valve Ringing ရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲ။
ဇန်နဝါရီ -28-2021 Variable Valve Timing System ၏အားသာချက်များကားအဘယ်နည်း။
ဇန်နဝါရီ -28-2021 Valve ပျက်ကွက်မှုနှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။
ဇန်နဝါရီ -28-2021 Car Engine Valve ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ။